Tarkkaanfiin humnoonni waraanaa fudhatan na yaaddesseera- Komishinii Mirga Namoomaa – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsTarkkaanfiin humnoonni waraanaa fudhatan na yaaddesseera- Komishinii Mirga Namoomaa
Tarkkaanfiin humnoonni waraanaa fudhatan na yaaddesseera- Komishinii Mirga Namoomaa
Dhaabbata Biyyoota Gamtoomaniiitti dubbi himtuu Komishinii Mirga Namoomaa, Raaviinaa Shamdaasanii
Dhaabbata Biyyoota Gamtoomaniiitti dubbi himtuu Komishinii Mirga Namoomaa, Raaviinaa Shamdaasanii, hordoftoota amantaa Ortodoksii ayyaana cuuphaa ayyaaneffachaa turan irratti Sanbata darbe rayyaan ittisa biyyaa ajjeechaa raawwataniin lubbuun namoota torbaa darbuu fi hedduun madaawuun, hedduu akka isaan yaaddesse beeksisan.
Sanbata darbe naannoo Amaaraa magaala Waldiyaatti humnoonni raayyaan ittisa biyyaa ayyaneffattoonni mootummaa balaalefachuu dhorkuun dhukaasa eegsluusaaniitiin hirmaattonni ayyaanichaa daandii cufuun qabeenya irratti badii geessisaniiru jedha gabaasni dhaabbatichaa.
Paartiin biyya bulchaa jiru, ADWUI, torban lamaan dura haaromsa gochuuf qopha’uu beeksisuu isaan booda rakkoon kun dhalachuun nama gaabbisiisas jedhu aadde Raavinaan.
Mootummaan humni waraanaa isaa ejjennoo fudhatan irratti of eeggannoo akka godhan akeekkachiisuu qabas jedhaniiru.
Pireezideentiin mootummaa naannoo Amaaraa obbo Gadduu Andargaachaw namoonni ajjeefamanii fi madaawan jiraachuu amanuun dhimmicha irratti ”qorannoo of eegganoon guutame” akka raawwatan dubbachuu isaanii hubanneerra jedhan.
Qorannoon kun si’ataa, walaba, dhiibbaarraa bilisaa fi bu’a qabeessa akka ta’uu fi namoonni badii kanaaf itti gaafatamummaa qaban hundi seeratti akka dhihaatan gaafataniiru.
Mootummaanis rifoormii seeraa fi imaammataa barbaachisaa ta’e fudhachuun qaamoleen seeraa raawwachiisan tajaajila sadarkaa idila addunyaa eeggate akka kennan gaafataniiru.
Oduudhuma wal fakkaatuun Dimookraatiki Ripaablik Koongootti muddama siyaasaa jiruun yaaddahuu aadde Raaviinaa ibsaniiru.
Sanbata darbe hiriira nagaa magaala Kinshaasaatti tureen namoonni jaha ajjeefamanii hedduun madaawaniiru.
Oromia Broadcasting Service – OBS added a new video: Turtii Gaazexeessitoonni OBS Dr.Mararaa wajjin taasisan OBS irratti eeggadhaa.